Otu esi etinye onye ahịa mbugharị na Fedora 35 - LinuxCapable
Nhọrọ 1. Wụnye onye ahịa mbugharị aka
Usoro 2. Wụnye mbugharị na Flatpack
Usoro 3. Wụnye onye ahịa mbugharị dị ka ngwugwu Snap
Otu esi ewebata onye ahịa mbugharị
Mbugharị bụ usoro teknụzụ nkwukọrịta nke na-enye vidiyo telephony na ọrụ nkata n'ịntanetị na-adị adị site na ikpo okwu sọftụwia nke ndị ọgbọ na ndị ọgbọ na-eji igwe ojii eme ihe maka teleconferencing, telecommuting, agụmakwụkwọ dị anya, na ọtụtụ ndị ọzọ.
N'ime nkuzi a, ị ga-ama otu esi etinye Zoom na desktọpụ Fedora 35 gị.
Site na ndabara, mbugharị adịghị na ebe nchekwa ndabere Fedora, ebe ọ bụ na ọ bụghị ebe mepere emepe. Yabụ iji wụnye Zoom, ị ga-achọ ibudata ngwungwu .rpm wee jiri aka tinye ya na Zoom's download page.
Nke mbụ, gaa na ibe nbudata wee nweta njikọ emelitere ma ọ bụrụ na agbajiri njikọ nbudata zuru ụwa ọnụ ugbu a; ọ bụrụ na ọ bụghị, gaba n'ihu na-agba ọsọ a iwu ka ibudata Zoom:
Mgbe emechara nbudata ahụ, wụnye ya .rpm ngwugwu site na iwu a:
Ọ ga-adị mkpa ka ejiri aka budata ma wụnye mmelite n'otu usoro dị ka nrụnye mbụ, ma ịkwesighi iwepụ ụdị ochie.
Ọzọkwa, mebie iwu a ka iwepụ onye ahịa mbugharị site na iji usoro nwụnye a na ọdụ gị.
Nke a ga-ewepụ onye ahịa Zoom yana usoro nrụnye niile.
Nhọrọ nke abụọ bụ ịwụnye Zoom na Flatpack nke etinyere na sistemụ Fedora gị. Usoro a na-ewu ewu yana ndị ọrụ Fedora.
Na-esote, wụnye Zoom site na iji Flatpack dị ka ndị a:
ụdị "Y" ugboro abụọ, wee pịa "Tinye igodo" ugboro abụọ ka ịga n'ihu na ntinye.
Flatpack na-edozi mmelite na-akpaghị aka oge ọ bụla ịbanye na sistemụ gị. Agbanyeghị, iji mee iwu mmelite, jiri ihe ndị a:
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ ụdị Flatpack nke Zoom, mee iwu a:
ụdị "Y" ugboro abụọ, wee pịa "Tinye igodo" ugboro abụọ na-aga n'ihu na mwepụ.
Enwere ike itinye mbugharị site na njirimara ngwugwu snap nke enwere ike itinye na Fedora. Nke a adịghị ewu ewu dị ka ụzọ ndị ọzọ. N'agbanyeghị nke ahụ, maka ndị ọrụ na-eji Snaps ma ọ bụ nwere mmasị iji ha na Fedora, ị nwere ike iji ihe ndị a iji wụnye onye ahịa Zoom na desktọpụ gị.
Tupu ị wụnye Zoom, ị ga-emerịrị ya classic snap nkwado site na ịmepụta symlink.
Na-esote, tinye iwu snap a ka ịwụnye onye ahịa Zoom:
Maka ọdịnihu, iji melite Zoom na ngwungwu ọ bụla Snap arụnyere, mee iwu a:
Ọ bụrụ na ịchọkwaghị itinye mbugharị, wepụ ya site na iji iwu wepụ Snap.
Nchọpụta nsogbu: Ọ bụrụ na ị na-efu akara ngosi mbugharị na menu ihe ngosi ngwa, malitegharịa PC gị kpamkpam, ma ọ ga-apụta. Nke a nwere ike ime na ngwungwu Snap n'oge jọgburu onwe ya, mana ịmalitegharị sistemụ na-edozi nke a.
N'ọnụ ọnụ gị, ị nwere ike imepe Zoom site na iji iwu a:
N'aka nke ọzọ, gbaa ọsọ mbugharị & iwu n'azụ ka ịtọhapụ ọnụ ọnụ:
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ ndị a na nke gị Fedora desktọpụ iji meghee ụzọ: Ihe omume > Gosi ngwa > mbugharị. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
The oge mbụ ị mepee Zoom, a ga-ekele gị site na ndị a.
Biko mepụta akaụntụ ọhụrụ, ma ọ bụ jiri akaụntụ gị dị ugbu a banye, nke ahụ bụkwa ya. Awụnyela mbugharị nke ọma na desktọpụ Fedora gị.
N'ime ntuziaka ahụ, ị ​​mụtala ka esi etinye Zoom site na iji ụdị dị iche iche dị ka ntinye akwụkwọ ntuziaka, flatpak na snap, yana imelite onye ahịa ma ọ bụ wepụ ya. N'ozuzu, Zoom bụ ihe ọzọ na-atọ ụtọ na nyiwe ndị ama ama dị ka Skype maka azụmaahịa ma na-atụ aro ka ịlele ma ị na-achọ ihe ọhụrụ.
Categories Fedora Tags Fedora 35, Mbugharị Mail igodo
Otu esi ebudata & Wụnye Fedora 35 & GNOME 41 site na USB Bootable Disk